Hurumende yeUSA Ingochinja iyo EV Mutambo.
Shanduko yeEV yatove kutoenderera, asi inogona kunge ichingova nenguva yayo yemvura. Vatungamiriri veBiden vakazivisa tarisiro yemotokari dzemagetsi kugadzira 50% yezvose zvinotengesa mota muUS na2030 kutanga kweChina. Izvo zvinosanganisira bhatiri, plug-in yakasanganiswa uye mafuta maseru emagetsi mota ...
Chii chinonzi OCPP & Nei Chichikosha Kumagetsi Kugamuchira Motokari?
Magetsi emagetsi ekuchaja zviteshi tekinoroji iri kubuda. Nekudaro, kuchaja chiteshi saiti varidzi uye vatyairi veEV vari kukurumidza kudzidza ese akasiyana terminology uye pfungwa. Semuenzaniso, J1772 pakutanga kuona ingaite senge kuteedzana kwetsamba nenhamba. Kwete. Nekufamba kwenguva, J1772 wil ...
Ndezvipi Zvinhu Zvaunofanirwa Kuziva Kana Uchitenga Imba EV Chaja
Imba EV Chaja inobatsira equitment kuendesa mota yako yemagetsi. Hezvino zvinhu zvepamusoro zvishanu zvekutarisa kana uchitenga Kumba EV Chaja. NO.1 Chaja Nzvimbo Mahara Paunenge uchizoisa iyo Imba EV Chaja kunze, uko isina kudzivirirwa zvakanyanya kubva kune zvakashata, iwe unofanirwa kubhadhara ...
USA: EV Kubhadharisa Kuchawana $ 7.5B Mune Yezvivakwa Bhiri
Mushure memwedzi yemhirizhonga, Seneti yakazopedzisira yauya pachibvumirano chebipartisan yezvivakwa. Bhiri iri rinotarisirwa kunge richikosha kudarika $ 1 trillion pamusoro pemakore masere, yakaverengerwa muchibvumirano chakawiriranwa chiri $ 7.5 bhiriyoni yekunakidza mota yemagetsi ichichaja zvivakwa. Kunyanya zvakanyanya, iyo $ 7.5 bhiriyoni ichaenda t ...
Joint Tech yakabvisa iyo yekutanga ETL Chitupa cheNorth America Market
Chiitiko chakakura zvekuti Joint Tech yawana chekutanga Chitupa cheETL cheNorth America Musika mu Mainland China EV Charger munda.
GRIDSERVE inozivisa zvirongwa zveMagetsi Highway
GRIDSERVE yakaburitsa hurongwa hwayo hwekushandura mota yemagetsi (EV) inobhadharisa zvivakwa muUK, uye yakaparura zviri pamutemo iyo GRIDSERVE Electric Highway. Izvi zvinosanganisira UK-wide network yeanopfuura makumi mashanu emagetsi akakwirira 'Electric Hubs' ane 6-12 x 350kW majaja mune yega yega, pamwe neinosvika 300 rapi ...
Volkswagen inonunura mota dzemagetsi kubatsira chitsuwa cheGreek kuenda green
ATHENS, Chikumi 2 (Reuters) - Volkswagen yakaendesa mota sere dzemagetsi kuAstypalea neChitatu padanho rekutanga rekushandura kutakura kwechitsuwa cheGreek, modhi iyo hurumende inotarisira kuwedzera kune imwe nyika. Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, uyo akagadzira green e ...
Colorado inobhadharisa zvivakwa inoda kusvika pazvinangwa zvemagetsi emagetsi
Ichi chidzidzo chinoongorora huwandu, mhando, uye kugoverwa kwemajaja eEV anodiwa kuti asangane neColorado's 2030 magetsi mota yekutengesa zvinangwa. Iyo inoyera veruzhinji, nzvimbo yebasa, uye imba charger zvinodiwa kune vafambi vemotokari padunhu redunhu uye inofungidzira mutengo wekuzadzisa izvi zvivakwa zvinodiwa. Ku ...
Maitiro ekuchaja mota yako yemagetsi
Zvese zvaunoda kubhadharisa mota yemagetsi isocket kumba kana kubasa. Uye zvakare, akawanda uye zvakanyanya anokurumidza majaja anopa chengetedzo mambure kune avo vanoda kukurumidza kudzoreredza simba. Kune huwandu hwesarudzo dzekuchaja mota yemagetsi kunze kweimba kana kana uchifamba. Ose ari nyore AC char ...
Ndeapi maMode 1, 2, 3 uye 4?
Mune muyero wekuchaja, kuchaja kwakakamurwa kuita mhando inonzi "modhi", uye izvi zvinotsanangura, pakati pezvimwe zvinhu, mwero wekuchengetedza matanho panguva yekuchaja. Chaja modhi - MODE - muchidimbu inotaura chimwe chinhu nezve kuchengetedzeka panguva yekuchaja. MuchiRungu izvi zvinonzi kuchaja ...
ABB kuvaka 120 DC zviteshi zvekuchaja muThailand
ABB yakahwina kondirakiti kubva kuProvince Electricity Authority (PEA) muThailand yekumisikidza zvinopfuura zana nemakumi maviri emachaja anomhanyisa-mhanyisa emota dzemagetsi munyika yese mukupera kwegore rino. Aya achave makumi mashanu kW makoramu. Kunyanya, zvikamu gumi nemaviri zveABB's Terra 54 chiteshi chekuchaja nekukurumidza chichava ins ...
Mari yekuchaja yeLDVs inowedzera kusvika pamusoro pemamirioni mazana maviri uye inopa 550 TWh muSustainable Development Scenario
EVs inoda mukana wekuchaja mapoinzi, asi mhando uye nzvimbo yemachaja haisi chete sarudzo yevaridzi veEV. Shanduko yehunyanzvi, mutemo wehurumende, kuronga kweguta uye zviwanikwa zvemagetsi zvese zvinoita basa muEV kuchaja zvivakwa. Iyo nzvimbo, kugovera uye mhando dzemagetsi vehi ...